Laisoa | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Pak-choi: ny tombony sy ny fanimbana ny laisoa sinoa
Ny karaoke sinoa pak-choi dia legioma izay mitovy amin'ny gidro, ary arugula amin'ny tsiro. Aza misavoana azy ireo anefa. Mahavariana ity vokatra ity satria ampiasaina amin'ny fitsaboana, ny famokarana ary ny famolavolana ny tontolo iainana. Andeha hojerentsika hoe inona ny choix. Culture Culture Efa ela dia nalaza tany Chine, Korea ary Japon io kolontsaina io.
Ahoana no fomba hijinjana sy hitahirizana ny voina mainty?
Ny karaoty maina dia matetika ampiasaina amin'ny fanomanana salady vaovao, satria misy loko mamirapiratra sy tsiro miavaka. Ao amin'ny tranokely iray matihanina, manampy amin'ny famokarana varimbazaha mahazatra ny vary toy izany. Raha ny fikarakarana ny ririnina amin'ny voamaina mena, dia miorina tsara amin'ny fomba tsotra fitehirizana izany.
Ahoana ny fampiasana sy ny fomba hanamboarana karipetra amin'ny ririnina amin'ny ririnina
Ny fitandroana ny fiarovana amin'ny ririnina dia fomba tsara hamokarana vitaminina alohan'ny fotoana mangatsiaka. Amin'ny fomba nentim-paharazana, ny iray amin'ireo safidy mahazatra indrindra dia ny hanangom-bolo sy hanangom-bozaka, ary raha maro be no fantatra momba ny voalohany, dia maro amin'ireo tompon'ny faharoa no afaka maminavina: ny zava-drehetra dia toa tsotra sy mora azo.
Enina siramamy siramamy fanangonam-bokatra ho an'ny ririnina
Ny kora dia tsy vitaminina tsara, fa zavamaniry tena ilaina ihany koa. Amin'ny vanim-potoana mafana, rehefa miseho eny amin'ny toeram-pivarotan-jazakely ny karaoty, dia samy miezaka manao salady matsiro sy salama daholo ny rehetra, na eo akaikin'ny ririnina aza, maro no manandrana mamolavola baolina mipetaka ao an-trano miaraka amin'ny fanampiana isan-karazany. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia manolotra fomba mahandro maromaro amin'ny vinaingitra miaraka amin'ny vinaingitra isika, mifanakalozy hevitra momba ny fizotran'ny mahandro tsy vitaminina, fa koa vokatra mahasoa, izay ampiasain'ny maro amin'ny fikarakarana fanafody.
Ahoana ny fomba hanangonana ny karaoty any Géorgie: fomba fanao isan-karazany amin'ny sary
Misy karazan-tsakafo maro ho an'ny sauerkraut, izay malaza any amin'ny firenena samihafa manerana izao tontolo izao, ary ny fitaovana miafina sy ny tsy fahampian-tsakafo mahandro an'io lovia io dia lasa hatramin'ny taranaka fara mandimby. Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny iray amin'ireo karazan-tsakafo ara-tsakafo ara-tsakan-dranomandry faran'izay matsiro indrindra isika, izay manamboatra fitohanana isan-trano amin'ny fiomanana amin'ny ririnina na amin'ny fanjifàna avy hatrany.
Endrey ny lolo tsara sy maitso tsara ho an'ny ririnina ho maina
Fantatry ny rehetra fa sakafo ara-pahasalamana be ny legioma, fa rehefa ririnina dia lasa sarotra kokoa ny manova ny sakafo, satria tsy lafo vidy fotsiny izy ireo, fa matetika no mamoy ny tsirony. Ny legioma bitika, ohatra, ny voankazo maromaro, izay mahandro haingana kokoa noho ny sauer, ary manana tsiro bebe kokoa, dia hanampy hanangona fahavaratra amin'ny ririnina.
Ahoana ny fomba hanamboaran-tsaka amin'ny lobolobo: recipe amin'ny ririnina
Ny fikarakarana mahazatra ny sauerkraut, matetika ireo vehivavy mpiompy matetika no manova ny tsironao, mampiavaka ny zava-manitra, voankazo sy voankazo. Iray amin'ireny fanavaozana malefaka ireny ny tandem-bary. Mba hahavitana tanteraka ny fitsangatsanganana dia mila mahafantatra ny tsiambaratelo mahandro sakafo ianao. Momba izany dia manohy miresaka isika. Inona no karazana karazana vita amin'ny karazam-bozaka vita amin'ny karazana fotsy, ny mpivady manana traikefa dia afaka misafidy mora kokoa ny iray izay mety kokoa amin'ny fantsona na sira.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Laisoa